Janaayo 21, 2004
Jamhuuriyada dimoqoraadiga federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya:
Maadooyinka iyo manaahiijta Dugsiyada waxbarasahada ma noqon doonaan dugsiyo u gaar ah Muslimiinta.
kulanaka wada tashiga oo mira dhalaya
QODDOBADII LA ISKU HEYSTAY EE BUUGGA AXDIGA IYO DASTUURKA OO LAGU HESHIIYEY.
Hogaamiyayaasha siyaasada Soomaalida iyo xubnaha soomaalida ee ka qayb galaya kulanka wada tashiga ee haatan ka socda safari Park hotel ayaa qoddobadii la isku maandhaafsanaa ee Qoraalka Buuga Axdiga iyo Dastuurka Soomaaliya maanta qodobadii lasoo hor dhigay saxiix ku wada jiiday.
Qodobada la isku hayey ee Qoraalka Buuga Axdiga iyo Dastuurka ayaa lagu heshiiyey sidan in loogu dhaqan galiyo ,waxayna u qoran yihiin sidan:-
1-Magaca Buuga Axdiga iyo dastuurka waxa uu Noqonayaa
Buuga Axdiga iyo Dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyada Dimoqoraadiga ee Soomaaliya.
2-Magaca Dawlada waxa uu noqonayaa: Jamhuuriyada dimoqoraadiga federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya .
3-Jamhuuriyada Dimoqoraadiga Federaalka Soomaaliya waxay ku dhaqmeysaa Dastuurka KMG, Beesha Caalamka waxay ka taageereysaa dhinac Farsamo iyo Mid dhaqaale.
4-Baarlamaanka Ku meel gaarka ah waxa uu noqonayaa tirada xubnaha xildhibaanada 275 xubno oo 12/boqolkiiba tirada xubnaha Baarlamaanka waa haweenka.
A- hogaamiyayaasha siyaasada qabiilada hoose ee Dawlada KMG ee TNG-da.
C-Hogaamiyayaasha Siyaasada ee shirka hogaamiye ku jooga.
ugu danbeyn waxaa ansixinaya Hogaamiyayaasha dhaqanka ee la aqoonsan yahay.
6-waqtiga Dawlada. Jamhuuriyada dimoqoraadiga Federaalka KMG Ee Soomaaliya waxa uu noqonayaa 5-(shan )-sanno.
Qododbka 38.0: Waxbarashada
10. Waxbarashada Islaamka waa ku qasab caruurta, dugsiyada dowladda iyo ku gaarka. Arrimmahan laguma dabaqi karo dugsiyadda ay leeyihiin dadka aan muslimka ahayn. Guji...
qoddobdan ayaa waxaa saxixay :-
A-Hogaamiyayaasha siyaasada ee Mbagathi ( SRRC,G-8,TNG-da Madasha ).
B-Ururada Bulshada ee Shirka .
C-Hogaamiyayaasha haweenka oo ku socda habka qaybsiga 4.5,tiradooda waa 5-haween ah.
D- Cabdiqasim iyo wafdigiisa oo galabta saxiixaya.
E- Golaha Badbaadada Qaranka oo war laga sugaya hogaamiyayaasha Soomaaliya ku maqan oo iyagu wali saxiixin.
qoraalka oo horey loogu qaybiyey ayaa markii ay Koox koox fikirkooda u soo gudbiyeen IGAD iyo Beesha Caalamka Celcelis ku sameeysaya oo ka codsatey in la isu tanaasulo intooda badan waa ay ogolaadeen oo saxiix ku jiideen.
DIGNIIN: Viruska Cusub ee Bagle oo Halistiisii Siyaadey [Jan 22]
DASTUURKA SOOMAALIDA EE LAGU QORAY KENYA.....
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 22, 2004